Hakha in Miss Ruth Par Tin Dim@Angelina Ruth Miss NewFace International 2020🇲🇲 (+Hmanthlak Pawl) – Buanchukcho
Hakha in Miss Ruth Par Tin Dim@Angelina Ruth Miss NewFace International 2020🇲🇲 (+Hmanthlak Pawl)
Hakha in Miss Ruth Par Tin Dim@Angelina Ruth, Miss NewFace International 2020🇲🇲, 🇲🇲 (Angelina Ruth)🇲🇲 The Model Of Myanmar Organization မှ Miss NewFace International 2020အဖြစ်ချင်းတိုင်းရင်းသူ ဟားခါး မယ်လေး (Angelina Ruth )အား ရွေးချယ်ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်းကြေ ငြာအပ်ပါသည်။
မကြာခင် ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ မနီလာမြို့မှာကျင်းပမယ့်နိင်ငံပေါင်း၃၀ ကျော်မှလာရောက်ယှဥ်ပြိုင်ကြမည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလှမယ်ရွေးချယ်ပွဲ ကြီးမှာ မြန်မာနိင်ငံကိုယ်စားပြုအဖြစ် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် သွားရောက်ယှဥ်ပြိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်… Beauty Pageant အားအစဥ်အမြဲ အားပေးကြသောမိဘပြည်သူများအနေဖြင့် အခက်အခဲများကြားမှ သွားရောက်ယှဥ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာကိုယ်စားပြုအလှမယ် ကို ဝိုင်းဝန်း အားပေးကြပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ Miss NewFace International 2020🇲🇲
Angelina Ruth. Age – 19 , Height – 5′ 6” Weight – 120lb Photographer – Ye Gyi MUA – Paing Dress – Kyaw Zwer. The Hakha Times
thawngpang dang relchap : PPST Nih Ralhrang Khawngsil He Biaruah An I Timhnak Biathli A Puang Ai
NUG Ralkap Bu Training Ai Lim Cang Lung A Hmui Tuk E (+Video)
Breaking News : SSPP/SSA Hruaitu hna he i ton dingah an hruaimi pakhat lampi ah an thah